Fused silica bụ akwa quartz ọcha dị ọcha nke gbazee iji mepụta iko site na iji teknụzụ fusion. Silica anyị a na-ejikọ ọnụ bụ ihe na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka mmiri na-arụ ọrụ nke ọma, nrụgide eletriki dị elu na nguzogide ọkụ ọkụ dị elu.
Ọdịdị dị elu na ịdị nro dị nro
Nnukwu nrụgide eletriki na ikuku ọkụ dị ala
Nghọta dị elu site na ultraviolet ruo na ụdị dị iche iche nke infrared
Ime Silica Fused: Egwuregwu Ọkụ
Dinglong nọ na-emepụta silica fused na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na usoro ịgbaze ọkụ eletriki. More kpọmkwem, Dinglong eji ogbe fusion usoro nke electric njikọ. N'ime usoro njikọta nke mmiri, a na-etinye nnukwu akụrụngwa n'ime ime ụlọ agụụ na-adịghị ọcha nke nwekwara ihe ndị na-ekpo ọkụ. Agbanyeghị na ejirila usoro a wee mepụta otu ngwungwu buru ibu, enwere ike imeghari ya iji mepụta obere obere, net net.
Nhazi nke Silica Fused: Nhazi usoro
N'ihi na ya ekweghị ekwe, fused silica chọrọ diamond ngwaọrụ hazie ya mechanically. N'ihi na ọ na-emebi emebi, enwere oke ike ọ ga - enwe ike ịnagide tupu ọ na - agbawa ma na - ebute na ọsọ ọsọ n'oge nhazi chọrọ ka ejiri nlezianya họrọ ya.
A na-arụpụta ihe ndị silica a na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ a kwadoro na Lianyungang, China. Site na afọ 30 nke nguzobe, Dinglong enwetala nkwado siri ike na teknụzụ ma nweta ahụmịhe dị egwu maka imepụta ezigbo quartz ihe. Anyị n'ichepụta Filiks kachasị nke kwekọrọ na ntụkwasị obi - na-enyere aka hụ na ngwaahịa na uru bara uru. Anyị kwenyere na ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ha nwere ike inyere anyị aka inweta ahịa ndị isi ma wulite ntụkwasị obi na ọbụbụenyi na ndị ahịa anyị.
Nke gara aga: Fused Silica ntụ ọka
Osote: Silica gwakọtara maka Industrylọ Ọrụ Elektrọnik